ओली सरकारका १०० दिन, के गर्यो सरकारले ? यस्ता भए काम || सुनौलो नेपाल
ओली सरकारका १०० दिन, के गर्यो सरकारले ? यस्ता भए काम
काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओली सिंहदरबार प्रवेश गरेको सय दिन पूरा भएको छ। सय दिन अवधिमा भारतसँगको सम्बन्ध सुधार सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा परेको छ।
सय दिनअघि प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा राजनीतिक स्थिरता, आर्थिक समृद्धि र विकासप्रति जनअपेक्षाका अनगिन्ती चुनौतीले उनी घेरिएका थिए। संविधान निर्माणसँगै चिसिएको भनिएको भारतसँगको सम्बन्ध सुधार पनि सरकारको चुनौती थियो। आजको अन्नपूर्ण पोष्टमा रामकृष्ण अधिकारीले लेखेका छन् ।